झापा–३ मा सिटौला कि लिङ्देन ? « Loktantrapost
झापा–३ मा सिटौला कि लिङ्देन ?
२३ आश्विन २०७४, सोमबार ०७:५१
भद्रपुर । राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक हैसियत बनाएका झापाका दुई राजनीतिज्ञ कृष्णप्रसाद सिटौला र राजेन्द्र लिङ्देन एउटै चुनावी गठबन्धनमा समेटिने भए पछि दुबैले दावी गर्दै आएको झापा क्षेत्र नं. ३ मा कसले कसलाई मैदान छाडिदिने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ ।
विगत ५ वटा आम निर्वाचनमा लगातार सांसदको उम्मेद्वार बन्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री सिटौला झापाको यस निर्वाचन क्षेत्रलाई कुनै हालतमा गुमाउन चाहँदैनन् ।
त्यसैगरी, २०६४ र २०७० को संविधानसभाको चुनावमा उम्मेद्वार बनेर प्रतिष्पर्धात्मक जनमत पाएका राप्रपाका महामन्त्री लिङ्देन झापा क्षेत्र नं. ३ लाई आफ्नो ‘बेस क्याम्प’ नै ठान्छन् । उनका लागि यो क्षेत्र राजनीति जत्तिकै प्यारो भएकाले छाड्ने कल्पना गर्न सक्दैनन् ।
तर, परिस्थिति कस्तो बनेको छ भने यही मङ्सिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा दुबैले उठ्ने दावी गरेको यस क्षेत्रमा कोही एक जनाले मैदान छाडिदिनै पर्छ । किनकि, राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमले सिटौलाको काङ्ग्रेस र लिङ्देनको राप्रपा एउटै लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा समेटिएर चुनावमा भिड्दैछन् ।
कसले कसलाई छाडिदेलान् त ? बाहिर बोल्दा र बैठकमा बस्दा आफ्नै अडान दोहोर्याए पनि अन्तिममा जसले जसलाई पनि मैदान खाली गरिदिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु अनुमान गर्छन् । एउटालाई छाडिदिन सजिलै होला, अर्कोले चाहिँ कहाँ जाने त ? यो प्रश्न भने झनै पेचिलो छ ।
‘कृष्ण दाई २०४८ सालदेखि कहिल्यै अर्को क्षेत्रमा जानु भएकै छैन’, जिल्ला तहमा उच्च हैसियत भएका एक जना काङ्ग्रेस नेता लोकतन्त्र पोस्टसँग भन्छन्–‘दुई चुनावमा मात्र यहाँ भिडेका राजेन्द्रजीले सरक्कै ठाउँ छाडिदिनु पर्छ नि ।’
हुन पनि हो, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० सालमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचनमा उठ्दै आएका नेता सिटौलाले एक चुनावमा हार्दै र अर्को चुनावमा जित्दै आएका छन् । २०४८ मा द्रोणाचार्य क्षेत्रीसँग, २०५६ मा पुष्पराज पोखरेलसँग र २०६४ मा पूर्ण राजबंशीसँग चुनाव हारे पनि उनले कहिल्यै अर्को सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको खोजी गरेनन् । २०५१ र २०७० सालको चुनावमा भने सिटौलाले जिते ।
उता, राप्रपाका महामन्त्री लिङ्देनको मूल घर गोलधाप हो । गोलधाप (हाल हल्दिवारी) झापा क्षेत्र नं. ३ मै पर्छ । २०६४ र २०७० को संविधानसभाको चुनावमा लिङ्देनले निकटतम् प्रतिष्पर्धीको हाराहारी मत ल्याएर राप्रपाका लागि झापाकै सबैभन्दा बलियो क्षेत्रको पहिचान बनाएका थिए । एक्ला एक्लै भिड्दा काङ्ग्रेस, एमाले र माओबादीलाई पछार्ने हिम्मत बोकेर यसपाली चुनावमा होमिने तयारी गरिरहेका उनी यो क्षेत्र कुनै पनि हालतमा नछाड्ने मनस्थितिमा छन् ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको उच्च तहको वार्तामा राप्रपाको तर्फबाट महामन्त्री लिङ्देन उनको पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँगै हुने गरेका छन् । मुलुकभरमा कमल थापाको हेटौडा, राजेन्द्र लिङ्देनको भद्रपुर र धवल शमशेर राणाको नेपालगञ्ज निर्वाचन क्षेत्र राप्रपाले प्रत्यक्ष चुनावमा जित्ने आँकलन गरेका ठाउँ हुन् । राणा मेयर बनेपछि झापा र हेटौडाको आफ्नो क्षेत्र नछाड्ने अडानमा राप्रपा पुगेको बताइन्छ ।
‘सबैभन्दा बलियो क्षेत्र छाड्ने कुरा आउँदैन’, राप्रपाका केन्द्रीय तहका एक नेता भन्छन्–‘कयौँ ठाउँ काङ्ग्रेसले रोज्न पाउँदा हाम्रो महामन्त्रीले एउटा ठाउँ रोज्न नपाउने भन्ने हुन्छ र !’ राप्रपाले गठबन्धनका लागि झापा क्षेत्र नं.३ लाई बटमलाइन बनाएको ती नेता दावी गर्छन् ।
यस निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका स्थानीय एक पत्रकार यहाँको मैदानबाट को बाहिरिएला भन्ने विषय अहिलेको सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको बताउँछन् । राप्रपा समर्थक र काङ्ग्रेस समर्थकहरुले आफ्नै नेताले यस क्षेत्रबाट टिकट पाउने हल्ला सुरु गरिसकेका छन् । ‘हल्ला मच्चाएर एकले अर्कोको मनोविज्ञान बुझ्ने रणनीति नै बनाएका होलान्’–ती पत्रकार भन्छन् ।
राप्रपाका एक स्थानीय नेताले काङ्ग्रेस नेता सिटौला ३ बाट सरेर २ नं. क्षेत्रमा जाने तयारी गरिरहेको दावी सुनाउँछन् । त्यस्तै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरु राप्रपा नेता लिङ्देन पनि सिटौलालाई सिट छाडिदिन राजी भइसकेको जिकीर गर्छन् । तर दुबै नेताविच कसले छाड्ने र कहाँ जाने भन्ने विषयमा छिनोफानो भइसकेको बुझिदैन ।
दुबै पार्टीले दुबै नेतालाई प्रतिनिधिसभाको चुनावमा लागि यस क्षेत्रको सर्वसम्मत उम्मेद्वार निर्णय गरिसकेका छन् । सिटौला काठमाडौँमा रहे पनि लिङ्देन भने फिल्डमा पुगेर माहौल बनाउन लागिसकेका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार राप्रपा नेता लिङ्देनले सिटौलालाई प्रत्यक्ष भेटेरै आफुलाई सो क्षेत्र छाडिदिन आग्रह गरेका छन् । तर सिटौलाले मानेका छैनन् । राप्रपाले सिटौलालाई झापा क्षेत्र नं. २ मा जान प्रस्ताव गरेको छ ।
लिङ्देनलाई विकल्पको रुपमा झापा क्षेत्र नं. २ मै जाँदा सहज हुने काङ्ग्रेस पक्षधरहरुको सुझाव पाइएको छ । तर सुधीर शिवाकोटी, उद्धव थापा, सरिता प्रसाई जस्ता काङ्ग्रेसका हस्तीहरुलाई पाखा लगाएर २ नं. क्षेत्रमा जाँदा झमेलामा फँसिने हो कि भन्ने लिङ्देनलाई लागेको हुन सक्छ ।
काङ्ग्रेसले राप्रपाको अर्को बलियो जनाधार भएको मानिएको झापा क्षेत्र नं. ५ मा गएर चुनाव लड्न पनि लिङ्देनलाई विकल्प सुझाएको बुझिएको छ । एमाले अध्यक्ष
केपी ओलीसँग भिडाएर हराउने झेल हुने ठानेका लिङ्देनले ३ नं क्षेत्र नै आफ्ना लागि अनुकूल हुने ठानेका छन् । दुबै नेता प्रभावशाली भएका कारण यो क्षेत्र छोडाउन पार्टी नेतृत्वलाई निकै सकस पर्ने निश्चित छ ।
राप्रपामा लिङ्देन सर्वसम्मत
बनियानी । राप्रपा झापा क्षेत्र नम्बर ३ क्षेत्रीय समितिले झापा क्षेत्र नं. ३ बाट पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन उम्मेदवार छनौट र भावी चुनावी रणनीतिको बारेमा कचनकलव गाउँपालिकास्थित बनियानीमा बसेको क्षेत्रीय बैठकले महामन्त्री लिङदेनको नाम सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि नवराज पनेरु (राजु) को नाम सिफारिस भएको छ । पनेरु स्थानीय तह निर्वाचनमा भद्रपुर नगरपालिकाका लागि राप्रपाबाट मेयर पदमा उठेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिक उम्मेदवार तर्फ राधा कार्की, सीता लम्साल र लक्ष्मी साँवाको नाम सिफारिस भएको छ । कार्की स्थानीय तह निर्वाचनमा भद्रपुरमा उपमेयर पदका उम्मेदवार थिइन् ।
प्रदेशसभा समानुपातिक उम्मेदवार तर्फ सत्यनारायण यादव, रवि ओझा, रुद्रमणि अर्याल र कृष्ण सुब्बाको नाम सिफारिस भएको छ ।